Abafazi abancinci kunye naMandla okuhlala ekhaya - Indlela Yokuphila
Abafazi abancinci kunye naMandla okuhlala ekhaya
Incwadi epapashwe ngaphezulu kweminyaka eyi-150 eyadlulayo inokuba yeyona nto iphambili ekuhlaleni ekhaya, into uninzi lwethu oluyifumene uxabiso olutsha (okanye ukukhathazeka) kwezi nyanga zidlulileyo. Inoveli kaLouisa May Alcott Abafazi abancinci bubungqina bokuba amabali amakhulu anokwenzeka ngaphandle kokuya naphi na. Inani elifanelekileyo lenoveli yeklasikhi yenzeka ekhaya-hayi phesheya, hayi ethekweni, hayi ngokuhlala namaqela abantu abasemngciphekweni wentlalontle yehlabathi ukuze nje banandiphe nabanye-kodwa ekhaya. Ayilobali lokuya kwi-adventure enkulu ngokushiya ikhaya kwaye udibane nabantu abatsha ongekhe ubabone; Libali lokuba yonke into oyifunayo ilungile kanjani ekhaya.
taylor indlu ekhawulezayo Rhode Island
Ukuba nosapho sisiseko sale noveli — phantse bonke abalinganiswa abaphambili bahlala phantsi kophahla olunye, kwaye nabalinganiswa abaxhasayo bahlala kufutshane, njengoLaurie kunye noMnu Laurence, abahlala kufutshane. U-Louisa May Alcott ude wafaka nenkuthazo ethile yokuhombisa ekhaya kwinoveli yakhe, njengaxa ekhankanya amakhethini aluhlaza namthubi chintz (esicinga ukuba uMario Buatta angavuma).
Ifoto yeNdlu yeziqhamo ukusuka ngo-1850.
IKlabhu yeNkcubekoImifanekiso kaGetty
Ayenzi kuphela Abafazi abancinci yenzeka ekhaya, yabhalwa ekhaya, kwaye elo khaya lisekhona nanamhlanje, njengembali yezindlu eyimbali e-Concord, eMassachusetts. ULouisa May Alcott ’s Indlu yeziqhamo yindawo ebonakalayo kwihlabathi apho Abafazi abancinci yabhalwa yacwangciswa, kwaye ikhaya lenziwa ngokutsha ngaphakathi nangaphandle kulungiso lwefilimu lwenoveli eyaziwayo, enkosi kumlawuli uGreta Gerwig, ogqibe kwelokuba enze ifilimu ngokupheleleyo kwilizwe lika-Alcott.
Abafazi abancinci Sisipili sobomi namhlanje ngeendlela ezininzi kunesinye: Eli bali likwajongana nokugula, njengoko iBeth Matshi inesifo somkhuhlane obomvu kwaye ulele ebhedini ixesha elide, kunye nodadewabo uJ. une-immune (Qaphela asikaze sibone iBeth milling malunga nokusasazeka kwesi sifo, kuba uhlala ekhaya!).
Imihombiso yepineyoni yekrisimesi
ULouisa May Alcott, umbhali we Abafazi abancinci
Ugcino lweHultonImifanekiso kaGetty
Ukuhambelana kweli bali kuyinyani ngoku kunakuqala ngenxa yezizathu ezininzi, kubandakanya ukubaluleka kunye nobuhle bokuhlala ekhaya. Unokufumanisa ukuba awunyanzelekanga ukuba ulinde uhambo ukuze ufumane amava, kwaye kungenxa yokuba awutshintshi ngenxa yokuba indawo okuyo iyenzeka. Njengoko uLouisa May Alcott watsho ngokwakhe, 'Amandla okufumana ubuhle kwezona zinto zithobekileyo enza ikhaya lonwabe kwaye ubomi bube mnandi.' Abafazi abancinci ibonisa ukuba, ukucaphula Indlu entle Imantra, ubomi buqala ekhaya, kwaye awudingi ukuya kwenye indawo ukuze uphile ngokwenene.
UMary Elizabeth Andriotis Umbhali oNikela UMary Elizabeth Andriotis ngumhlobiso wasekhaya kunye nombhali wenkcubeko oseNew York.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
izimvo kwigumbi lokulala elinethambeka
ibhegi yomthi weKrisimesi
iindawo ezishiyiweyo zokuhlola
Iipateni zethayile yangaphantsi